Chest massager – MM Online Shopping
ဒီပစ္စည်းလေးဟာ ရင်သားကို ပင့်တင်ပေးတယ် ၊ ပုံစံတကျစေပီး ရင်သားကိုပြည့်တင်းလာစေပါတယ် ရင်သားရဲ့ tissue များအနာတရဖြစ်ခြင်း ၊ အကြောပြတ်ရာထင်းခြင်း တိုနဲ့ရင်သား တဖက်နှင့်တဖက်အရွှယ်အစားမညီခြင်း တို့ကိုမဖြစ်ပဲ ကြီးထွားပြီးလျှင်လည်းရင်သား ပြန်မကျစေပါ •
လေစုပ်အားကို အတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ပီးအသုံးပြုလိုရပါတယ် လေအများဆုံးစုပ်အားက55Kpaပါ
ပါဝင်ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများ အနေနဲ့ABS + Silicone + Electronic Components
အားသွင်ချိန်: အကြမ်းဖျင်း ၆နာရီကနေ ၈နာရီ
Box Size: Approx. 21.5 * 22cm / 8.46 * 8.6inch
Package Weight: Approx. 575g
Function: Enlarging and enhancing the breast,
လုပ်ဆောင်ချက် ရင်သားကိုကြီးစေပြီး ပုံစံတကျစေသည်။ ရင်သားတွဲကျမူကို ပြန်လည်တင်းမာလာစေပီး ရင်သားတွင်ရှိသော tissueများရဲ့ ဆန့်ကျုံသတ္တိကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်
Package Include: 1 x Breast Massager
အသုံးပြုသင်သောသူများ ရင်သားပြားချပ်နေသောသူတွေ ကိုယ်ဝန်တားဆေးသုံးသူတွေ ဟော်မုန်းဆေးသောက်သုံးသူတွေ အလွန်အမင်းဝိတ်ကျပီး ရင်သားမရှိသူတွေ အပြင်းအထန်ဖျားခြင်းတို့ကြောင်ရင်သားပုံစံပြောင်းလဲသူများကတော့ အမှန်တကယ် သုံးစွဲသင့်ပါကြောင်း လမ်းညွန်ပေးလိုက်ပါတယ
Be the first to review “Chest massager” Cancel reply
Ks17,000.00 Add to cart
Olala female condom (invisible liquid condom )
Ks35,000.00 Add to cart